Dawoco ka yaabisay seeynisyahanada adduunka - BBC News Somali
Dawoco ka yaabisay seeynisyahanada adduunka
Lahaanshaha sawirka Universal Images Group/Getty Images
Image caption Dawacada dhulka qaboobaha ku nool
Sida uu qorey wargeyska Norway kasoo baxa ee Semitsiag, seeynisyahanada ayaa la yaabay safarkan qariibka ah ee ay dawada gashay, iyada oo ka gudubtay dhul aad baaxadiisa u balaaranyahay, qaboowgiisuna daranyahay.
Cilmi baarayaal ka tirsan mac-hadka Polar ee Norway ayaa dawada oo hal sanno jir ah ku xiray qalabka GPS-ka ee lagula socdo dhaqdhaqaaqa hadba sheeyga lagu rakiyo.
Musiibo kalliftay in xayawaan uu gaadiid ka dhigto xayawaan kale!
Nin gurigiisa ku xannaaneeya Xayawaan halis ah
Dameer la xardhay si xayawaan kale loogu ekeysiiyo!
"Waan rumeysan weynay waxa ay indhaheena arkayaan, waxaan u malaynaynay in ay dhimatay, ama doon lagu qaaday, balse wax doon ah aagga maba joogin" ayay tiri Eva Fuglei oo ka tirsan mac-hadka Polar.
Ma jirto dawado safarka intaas la'eg gashay inta la ogyahay.
"Xilliga jiilaalka cunto badan ayaa la helaa, balse xiliga qaboowga waa dhib, waana marka dawooyinka ay u haajiraan meelo kale si ay cunto u helaan, balse dawacadan waxa ay tagtay meel aad u fog" ayay tiri.
Image caption Dawoco cad.
Lahaanshaha sawirka DeAgostini/Getty Images
Image caption Qaar ka mid ah xayawaanka ku dhaqan dhulka qaboobaha